सबै बालिका एक macho, प्रेस घन जो बाहिर सुन्दर tanned पेट खडा को सपना। सबै केटाहरु हार्ड एब्स र साथ फैशनेबल जोडेको केटी को सपना एक सपाट पेट। र अभ्यास मा dreamers के हुन्? बोसो हो Folds र यो सबै "सजावट" पछि कमर अझै पनि खोज्न आवश्यक ...
यसलाई मौलिक आफूलाई गर्न भने, यो के गर्न एकदम सम्भव छ विशेष गरी देखि, स्थिति परिवर्तन गर्न समय छ। तपाईं जो कोहीले macho रुचि लाग्छ? स्वाभाविक, एक सपाट पेट संग केटी। तसर्थ, हामी आफ्नो स्तर नजिक प्राप्त गर्न सम्भव सबै गर्नुपर्छ, र यसैले आफ्नो हृदय विजयी मा सफलता को आफ्नो संभावना बढ्छ। र एक केटी जो देखावटी आवश्यक छ? स्वाभाविक, राम्रो छ जो मान्छे सबै चार पासा palpated। समानता जस्तै आकर्षित गर्छ। त्यसैले आफूलाई पहिलो स्थानमा, देवी को सपना भएकालाई बन्न Apollonia र घन प्रेस माथि पंप गर्न सुरु गर्नुपर्छ।
खैर, यो घर मा गर्न सकिन्छ।
पहिलो व्यायाम स्कूल हामीलाई सबै ज्ञात एक मानक र राम्रो छ। साथै, यो हामी एक पटक शारीरिक शिक्षाको पारित कि स्तर को सूचीमा छ। खैर, यो धेरै प्रभावकारी छ कि यो प्रेस माथिल्लो भाग फुलाउँदा आउँदा। उनको टाउको पछि हात चटाई मा झूठ, खुट्टा sogibaem घुँडा र सुरु ट्रंक को अप। मूल वृद्धि - सही - बाँया, तेस्रो गर्न - बीचमा, दोस्रो।
समय, प्रशिक्षण डाटा, हाम्रो सुझाव फाइदा लिइरहेको जटिल सकिन्छ: त 20 पटक गर्दै, र त्यसपछि एक खुट्टा उचाली: अगाडि मात्र ढलान गर्न जारी राख्न र केन्द्र भनेर स्थिति 20 पटक, त्यसपछि अन्य खुट्टा उचाल्न र एउटै कुरा फेरि बीस पटक के । निस्सन्देह, प्रेस ब्लक तपाईं पहिलो सत्र पछि तुरुन्तै देखिन्छन्। तर मांसपेशीमा भार गर्न, निरन्तर, लोड अर्को समय कम गर्न inclining whining हुनेछ accustomed छैन। कुनै मामला मा सुस्त दिन छैन अप: अभ्यास मात्र प्रभावकारी छन् मांसपेशिहरु काल अप, छ भने - दुख। समय, शरीर प्रयोग हुन्छ, र दुखाइ गायब हुनेछ।
घन कसरी निर्माण गर्ने? यो व्यायाम लागि पहिलो केही थप थप्न आवश्यक: तिनीहरूलाई को एक - खुट्टा को वृद्धि। एक कुर्सी वा पछिल्तिर सुझाव गर्दैन एक पीठ बस्नुहोस्। तपाईं एक कुर्सी मा व्यायाम गरिरहेका छन् भने, यो पर्खाल सार्न राम्रो छ, त्यसैले उसले आफ्नो ब्यालेन्स राखिएको। आफ्नो खुट्टा उठाउनु र तपाईं जस्तै लामो तिनीहरूलाई राख्न - यो तपाईं कम एब्स भयभीत। व्यायाम दोहोरिने 5-10 पटक सुरु गर्न।
यस्तो "बाइक" र "कैंची" को रूपमा प्रेस को घन र अभ्यास रूपमा यो गाह्रो कुरा मदत। स्वाभाविक, तपाईँ तिनीहरूलाई सम्झना छ, दुई अभ्यास गर्ने supine स्थिति प्रदर्शन गर्दै छन्। को "कैंची" बनाउने, तपाईं सीधा खुट्टा त्यसपछि छेउमा धक्का उठाउनु पर्छ र त्यसपछि crosswise तिनीहरूलाई राख्नु। प्रेस एकदम exerts। साइकल: आफ्नो पछाडि झूट बाइक चढेर बहाना।
खैर, त्यसैले कि मांसपेशिहरु हाम्रो औंलाहरुमा मा काम दिन भर, राखिएको थियो तपाईं काम गर्दा सक्दैन बाहिर आफ्नो पेट मांसपेशीमा तनाव, पाँच मिनेट होल्ड, त्यसपछि आराम र त्यसपछि फेरि फाटो।
कसरी बारेमा मात्र सल्लाह चाँडै प्रेस माथि पंप बारम्बार र कठिन कसरत: घन गर्न, निम्न छ। जो हामी तपाईंलाई रोशनी पेट व्यायाम, अन्तिम सास मा लगाउने गर्छन्। त्यसपछि परिणाम चाँडै सजिलै देखिने हुनेछ। सामान्य मा, देखि स्लेज को गर्मी मा तयार छ, र तपाईं हिउँदमा समुद्र तट सिजन लागि आफ्नो आंकडा तयार छ। नियमित व्यायाम, कम तीव्र albeit, तेजस्वी परिणाम निम्त्याउन हुनेछ।
खैर, केही भौतिक प्रेस मा अभ्यास आफ्नो भुँडी घन प्रेस देखा पर्न पर्याप्त छ। आफ्नो आहार समीक्षा गर्नुहोस्। शक्ति प्रोटिन समावेश, फाइबर, सही हुनुपर्छ। समय मा, सोडा, छिटो खाना र सुर्ती संग रक्सी बारेमा भूल हुनेछ। तपाईं प्रेस ब्लक एक स्वस्थ जीवन शैली को बाटो भएका छन् पंप गर्न चाहनुहुन्छ। सोही, यो व्यायाम जगिङ, को काँध मांसपेशीमा को साइकलको र मुद्रास्फीति पूरक गर्न उपयोगी छ। एक वास्तविक macho वा देवी सबै सिद्ध आकारमा हुनुपर्छ!
को काँध लागि अभ्यास - घर मा छ
अलौह भेरा संयंत्र। अद्वितीय पातहरु को उपचार गुण
प्रेम र पेय सराहना कसैको लागि सही उपहार - mulled रक्सी लागि सेट
डबल-बैरल राइफल्स (तस्बिर)। कुन दुबै पट्टीको बन्दूक राम्रो छ?
प्राकृतिक होटल "Gentry" (Korolev)
विदेश बाट मास्को कल कसरी? सस्तो कल कसरी?
"वचन" मा एक व्यापार कार्ड कसरी बनाउने? निर्देशन